Ilungelo lamaLungelo: Ukuzenzekelayo ukuCocwa kwamaLungelo eMxholo kwiXesha langempela | Martech Zone
Ilungelo lamaLungelo: Ukuzenzekelayo ukuCocwa kwamaLungelo eMxholo kwiXesha leXesha
NgoLwesithathu, Meyi 10, 2017 NgoLwesine, Meyi 11, 2017 Douglas Karr
Kwangoko kulo nyaka, kutyholwa ukuba uChipotle uthathe ifoto yomphathi we-Sacramento ngaphandle kwemvume yakhe emva koko wayisasaza kwizibambiso zabo zentengiso. Inkqubo ye- ilinde isuti yeyazo zonke iingeniso zenkampani ngaphezulu kweminyaka eli-9… $ 2.2 yezigidigidi.
Yimeko ebenokuthintelwa kusetyenziswa itekhnoloji ebandakanya inkqubo yokuqinisekisa ukuba kukhutshiwe ukukhutshwa kwaye ifoto ibikhona ukuba isetyenziswe kwaye ihanjiswe… ngaphambi kokuba isasazwe!
I-FADEL yazisa umnikelo omtsha weempawu kunye neearhente zokulandela umkhondo wamalungelo omxholo wedijithali abawusebenzisayo ukuvelisa izinto zentengiso kunye nentengiso. Izibonelelo zibandakanya ukufumana iiasethi zemithombo yeendaba zedijithali ngokukhawuleza kwintengiso ngobuchule, ukonga ixesha kunye nemali kwinkqubo yamalungelo okuthintela kunye nokuphepha iindleko zokusetyenziswa gwenxa.
Ilungelo lamaLungelo yenzelwe ukudibanisa kweyona aziwa kakhulu Ulawulo lwee-asethi zedijithali kunye namaqonga entengiso asetyenziswa ubukhulu becala kwiiarhente ezincinci kunye neempawu, kubandakanya indawo yokuhlala, VulaText, Ibhokisi kwaye Hlukana.
Abaphathi beBrand bafumana ukufikelela kwangoko kwiiprofayili zetalente kubandakanya ubudlelwane babo be-arhente, ii-asayinimenti, iimpawu kunye nezinto ezinxulumene nazo kunye nezivumelwano, ukukhutshwa kunye nokusetyenziswa. Abadali banokujonga ngokukhawuleza uluhlu olupheleleyo lweemveliso zentengiso- kwiimodeli, abadlali kunye neefoto kumculo, imifanekiso, kunye neentengiso ngokwazo- ngokuchasene nemigaqo yesivumelwano ukucacisa amalungelo ngexesha langempela, konke kungaphakathi kweqonga lolawulo lomxholo wabo.
Sizisa konke esikufundileyo kumava ethu eminyaka eli-14 kunye nokwenziwa kwezinto ezintsha ngolawulo lwamalungelo kunye netekhnoloji kuluntu lwezentengiso kunye Ilungelo lamaLungelo. Inokudityaniswa ngokukhawuleza kwaye ngokulula kwiinkqubo ezikhoyo zeshishini kunye neenkqubo zokunciphisa iindleko, ukwandisa utyalo-mali kunye nesantya kwintengiso kunye nokunciphisa umngcipheko omninzi onokuthi uvele kukusetyenziswa gwenxa kobuninzi beempahla kunye nezinto ezikwiintengiso. Igosa eliphethe i-ofisi.
Imikhankaso yentengiso ixhomekeke kuqokelelo olubanzi lweeasethi zedijithali ukunxibelelana nomxholo wophawu. Nangona kunjalo kwimeko yokuxinana komxholo, uninzi lwemiceli mngeni lunokucothisa iphulo kunye nokudala umngcipheko kwishishini. Ilungelo lamaLungelo nguFADEL sisisombululo esilula nesingenamthungo esenza ukuba umthengisi enze oku:
Ukukhawulezisa ukuveliswa kwentengiso kunye nokusasazwa ngesiqinisekiso sokuba yeyiphi iasethi- eprinta, eyidijithali, ividiyo kunye netalente- enokusetyenziswa nini, phi kwaye njani.
Khusela iimveliso ezivela kwimixholo engahambelaniyo ezinokubiza izigidi ngezohlwayo, ukuphinda kwenziwe umkhankaso, kunye ne-PR engalunganga.
Sika iindleko ngokunyusa ukusebenza ngokukuko kunye nokukwazi ukuvavanya lonke uluhlu lwezinto ezisetyenziswayo ukuze usetyenziswe ngokupheleleyo.
Ukulingana kwebhanki kweGalvanize kunye nokusebenza kubahlalutyi ezibonelela ngengqondo kukhangelo lomxholo kunye nokusetyenziswa ukuze ukwazi ukuyandisa kuyo yonke into eprintwayo, eyidijithali, yosasazo kunye neendlela zentlalo.
tags: Indawo yokuhlalaHlukanaIbhokisiUlawulo lwee-asethi zedijithaliulawulo lwamalungelo edijithalifadellawulo lweefaVulaTextamalungelo ilifu
Imbali ye-imeyile kunye noyilo lwe-imeyile
Okulungileyo, oMkhulu, kunye nowoyikisayo ngobuhlakani bobugcisa